Wasaaradda qorsheynta ee Puntland oo bilawday daraasad sahan ah oo lagu baarayo nolosha aasaasiga ah ee bulshada. – Radio Daljir
Garowe, Apr 28 – Wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Puntland ayaa bilawdey daraasad sahan ah oo ay ku xaqiijineyso nolosha aasaasiga ah ee bulshada Puntland.
Agaasimaha guud ee Qorsheynta & Iskaashiga Caalamiga ah ee Puntland Maxamed Cali Ismaaciil ayaa shir jaraa’id oo uu ku qabtey xafiiskiisa magaalada Garowe ku sheegay in ay wasaaraddu ay bilawday daraasad, ayna sahan u dirtey ilaa boqol iyo labaatan (120) qof oo maraya dhammaan gobollada Puntland, oo kuurgalaya nolosha dhabta ah ee ay ku nool yihiin carruurta, hooyooyinka, iyo dadka da’da ah ee ku nool gobolada Puntland; waxaana uu intaasi ku daray in sahanku uu socon doono ilaa bisha May ee sanadka 2011.
Daraasadan sahanka ah ayaa agaasimuhu ku tilmaamay mid fursad wanaagsan u noqon kara bulshada Puntland, maadaama lagu xaqiijinayo nolosha aasaasiga ah. Md. Ismaaciil ayaa sidoo kale sheegey xogta ka soo baxda sahanka la sameynayo in ay iska kaashan doonaan hay’adaha dawliga ah ee Puntland sidii loo dabooli lahaa baahiyaha ka soo baxda sahankaasi ay wasaaraddu bilawdey.
Bilowgii bishii Maarso ee sanadkaan 2011 ayaa wasaaradda Qorsheynta & Iskaashiga Caalamiga ahi ay Garowe isugu keentey 130 qof oo ka kala yimid Puntland, Somaliland, iyo gobollada bartaha Somaliya, waxaana loo tababarayey qaabka loo sahmin karo nolosha aasaasiga ah ee lagaga nool yahay gobollada ay ka yimaadeen.
Cabdi Xasan Rooble ‘Awoowe’,